Kwi-iPhone eyiyo siyiphatha ngaphezulu kweminyaka engama-10 Ukunika ingxelo mihla le malunga nayo yonke into enxulumene ne-Apple, ngohlobo lweendaba, izifundo, uhlalutyo, uphononongo, usetyenziso, ukhuseleko kunye ngakumbi ngaphandle kokulibala ukungakhathali, okusivumele ukuba sibe Enye yeebhlog ezithetha kakhulu iSpanish ezinxulumene neApple.
Iqela le-Actualidad le-iPhone lenziwe liqela le abapapashi abanamava abanzi kwiimveliso zeApple. Ngapha koko, uninzi lwethu luyaqhubeka nokubamba i-iPhone yethu yokuqala njengegolide kwilaphu. Kwibhlog yethu unokufumana isisombululo kuyo nayiphi na ingxaki, engaqhelekanga inokubonakala ngathi, ngecandelo lethu lokufundisa. Ukuba awuyifumani, ungaqhagamshelana nomnye wethu ukuze sonke, sizame ukufumana isisombululo.
Unokufumana uhlalutyo olupheleleyo, ngejelo lethu leYouTube, kuzo zonke iimveliso ezenziwa nguApple kwintengiso rhoqo ngonyaka. Ukongeza, sihlalutya ukwaziswa kweetheminali ezibaluleke kakhulu kukhuphiswano ngqo oluvela kwiApple, ngokwenza uthelekiso kunye nokuhlalutya inqaku ngenqaku ngoncedo nangalunganga ... ngaphandle kokuphulukana nokungakhethi nangaliphi na ixesha.
Iqela labahleli beActualidad iPhone lenziwe liqela le Iingcali ze-iPhone ukusuka Apple.
Ukuba ufuna nokuba yinxalenye yeqela le-iPhone eyiyo, gcwalisa le fomu
Molo! Ndiqale kwihlabathi le-Apple nge-iPod Shuffle, yonke into ibingummangaliso, ukubakho kokumangaliswa ziingoma ezingacwangciswanga ozifakileyo kuluhlu lwadlalwayo lwe-iTunes. Emva koko kwafika i-iPod Nano, i-iPod Classic, kunye ne-iPhone 4 ... Ndichukunyiswe yi-Cupertino ecosystem, ndayifumana indawo yam kwi-Actualidad iPad, emva koku senze umtsi ku-Actualidad iPhone neqela elikhulu endabelana nalo " Inkululeko "yeCupertino, kwaye ndiyaqhubeka nokufunda nayo yonke imihla. Nqamla uxhulumaniso? Ewe, kodwa ngegajethi ye-Apple 😉
I-Apple yenza izixhobo ukwenza ubomi bethu bube lula. Kodwa yinto eguqukayo yendalo iphela, kwaye ndihlala ndithanda ukuba semgangathweni. Kuyandonwabisa ukufunda nokuziqhelanisa namava amatsha ne-manzanitas yam kwaye ndabelana ngayo nabafundi. Ukugxilwa kwindalo yonke eyenziwe yimisebenzi, okoko iApple Watch yam yabusindisa ubomi bam.
Uzalelwe eMadrid kunye neenjineli zonxibelelwano. Ndingumthandi wetekhnoloji kwaye ngakumbi yonke into enxulumene neApple. Ukusukela i-iPod kwaye kamva kwaphuma i-iPhone, ndiye ndaphambuka kwihlabathi le-Apple, ndimisela kwaye ndifumana indlela yokuququzelela yonke indalo apho zonke iimveliso zam zinokunxibelelana.
Intatheli ekhethekileyo kwi-iPhone. Ndihambahamba emhlabeni ndifumana izixhobo ezintsha ezivela kule brand enkulu, apho kunokwenzeka khona ukuba wenze izinto ezimangalisayo kwaye ube nobomi obulula.
Itekhnoloji ye-Apple efuna ukwabelana ngolwazi kunye nokufunda kwabanye. Ndizama ukubeka inkanuko kuyo yonke into endiyenzayo, ke ndiyathemba ukuba ingcebiso yam iya kukunceda ukuphucula amava akho nge-iPhone yakho.
Okwangoku ndizinikezele kwihlabathi le-blogger kunye nombutho weziganeko. Ndiyayithanda i-Intanethi, nayo yonke into enento yokwenza neApple. Ndiyakonwabela ukufunda amaqhinga amatsha e-iPhone ke ndiyathemba ukuveza onke amaqhinga onokuwafumana kwi-smartphone yakho.
Umthandi wobuchwephesha obutsha, kunye nomsebenzisi we-iOS kunye ne-OSX. Ewe ndingumlandeli weApple, yiyo loo nto ndibhala kule magazini ukuze abafundi bazi ezona ndaba ze-iPhone.
Ukubhala kunye nePhones zizinto ezimbini endizithandayo. Kwaye ukusukela ngo-2005 ndinethamsanqa lokudibanisa. Eyona nto intle kunayo yonke? Ndiyaqhubeka nokonwabela njengosuku lokuqala ndithetha ngayo nayiphi na into entsha eziswa ngu-Apple kwintengiso yeefowuni ze-iPhone.
Intatheli iyazithanda izixhobo zefowuni. Ndihlala ndihlala ndinolwazi malunga ne-iPhone, i-iPad, iApple Watch kunye neMacBook Pro, ke injongo yam kukuba bonke abafundi bazazi iindaba.